Nzira dzakachengeteka dzekuyedza Linux pasina kugadzirisa yedu yakaoma dhiraivha | Linux Vakapindwa muropa
Virtualbox inogona kumhanya zvese kugoverwa kweLinux.
Kana isu tichitaura nezvenzira dzakachengeteka dzekuyedza Linux, hatireve kuti dzimwe nzira hadzina kuchengetedzeka. Isu tinoreva izvo zvinokutendera kuti uedze Linux usingagadzirise zvachose kune hard disk. Ndokureva, zvakapesana, nezvandakaita pandakatanga. Ndakatanga kuisa kugoverwa kweLinux ndisingazive kwazvo zvandaiita uye ndisina nzira yekumisikidza Windows. Ehe, kuisirwa kwakatadza pakati.
Neraki, iyo tekinoroji yakafambira mberi zvishoma. Kuiswa kweLinux kunoitwa muzviitiko zvakawanda uchishandisa mamiriro emifananidzo. Kazhinji yenguva, iro basa remushandisi rinogumira kupedzisa dhata ravo nekudzvanya Rinotevera. Asi, kana iwe ukasashinga kuiisa pane yako huru komputa parizvino, kune dzimwe nzira.
1 Nzira dzakachengeteka dzekuyedza Linux pasina kuiisa pane yako hard drive
1.1 Rarama mode
1.2 Kuchengetedza pane rekunze dhisiki kana pendrive
1.3 Virtual michina
1.4 Webhu nzira
Nzira dzakachengeteka dzekuyedza Linux pasina kuiisa pane yako hard drive
Izvo zvinofanirwa kutaurwa izvo hapana imwe yenzira dzataurwa dzinopa chiitiko chakafanana nekuisa pane hard drive. Nekudaro, nekuzvisanganisa, tinogona kuve neruzivo rwekuti chii chinogona kuitika.
Wakaterera here musi wakatsanangurirwa zvirevo kuchikoro? Imhaka yekuti ini ndoda kuti iwe unzwisise mutsauko uripakati pekuisa Linux kubva pendrive kana kuiisa pane iyo pendrive. Muchiitiko chekutanga, iyo pendrive ndiyo sosi yepakati yekumisikidza, mune yechipiri kesi ndiko kuenda kwekumisikidza, ndiko kuti, inozadzisa basa rakafanana neiro redhiski.
Zvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux zvine izvo zvinonzi live mode. Nemararamiro emhando pIwe unogona kuve neruzivo rwakafanana neiyo sisitimu yekushandisa kana yaiswa nemamwe mapako.
Speed ​​yekupindura haizove yakafanana
Kugadziridza kwaunoita kucharasika paunodzima komputa.
Mune live mode Ram ndangariro dzinoita mabasa e hard disknekudaro kumhanya uye nzvimboganhurirwa. Kunyangwe mukombuta yemazuva ano iwe unogona kuishandisa pasina anonzwisisika kurasikirwa kwekuita.
Ndinofanira kuita kujekeswa. Ini ndakati mune live mode data inorasika kana kudzima komputa. Chaizvoizvo, kumwe kugovera kunokutendera iwe kuchengetedza nzvimbo pane iyo pendrive yekuchengetedza izvo zvigadziriso. Idzo shanduko dzinoiswa muRam paunopinda zvakare. Asi zvese zvinoenderana nekugona kwenzvimbo yekuisa yepakati.
Iyi nzira yekuyedza Linux iri yakanaka pakujairirana nedesktop yako uye kuyedza kuenderana kwehardware.
Kuchengetedza pane rekunze dhisiki kana pendrive
Pano tasvika pane chikonzero nei ini ndaisimbirira pamusiyano uripo pakati pe "kuisa kubva" uye "gadza kusvika. Linux inogona kuiswa pane 16gb kana yakakura pendrive kana pane yekunze disk. Kubatsira kukuru kweichi chikumbiro ndechekuti iwe unogona kushandisa yako Linux pane chero imwe komputa. Kugoverwa kukuru kuchawana uye kurodha pasi madhiraivha anodikanwa.
Yekunze dhiraidhi ine chiyero chakaenzana neyeyakajairika hard drive, saka iro dambudziko chete nderekuti kana ukaifambisa yakawanda unozopedzisira waiita isingabatsiri. Muchiitiko chekushandisa pendrive iwe unenge uine chakakosha nzvimbo muganho.
Fomu iri rinotipa lchiitiko chakafanana nekuve neLinux yakaiswa pakombuta yedu.
Muchina chaiwo chirongwa chinonyepedzera kunge komputa. Kubatsira kukuru kweiyi nzira ndeyekuti haufanire kugadzirisa chero chinhu pakombuta yako. Iko kukanganisa kukuru ndekwekuti iwe hauzive kana paine kusawirirana neyakaomarara Hardware yako.
Kana iwe ukashandisa Windows 10, ino inoshanda sisitimu inosanganisira Hyper-V, iri muchina software iyo inobvumidza iwe kurodha pasi uye kuyedza iyo Ubuntu Linux kugovera.
Imwe nzira yakanaka, mune ino kesi multiplatform, ndeye Virtualbox. Virtualbox zvinokutendera tevedzera iyo yekuisa yeLinux kubva kune pendrive kana kubva ku cd / dvd player. Uye zvakare, inounza marongedzero akarongedzwa ezvikamu zvikuru. Sezvo izvi zviri kunetsekana, iwe unofanirwa kuzvirodha pamurume.
Izvi zvinonyanya kuda kuziva pane chimwe chinhu chinoshanda. Pane nzira mbiri dzatinogona kuona chimwe chinhu senge chiitiko cheLinux
JSLinux: Inotitendera edza iyo inoshanda sisitimu uchishandisa graphical interface kana mune zvinyorwa modhi.
Ubuntu Kuratidzwa: Pane ino saiti unogona kuyedza ruzivo rwekushandisa iyo Gnome desktop uye kuvhura nekuisa zvirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nzira dzakachengeteka dzekuyedza Linux
En https://distrotest.net/ unogona kuyedza 737 linux kugoverwa, pasina kurodha pasi kana kuisa chero chinhu.